ADEEGYADA CANSHUURTA EE UKRAINE AYAA XANNIBAY BIXINTA BACRIMINTA BELARUS - MAQAALLO
Macluumaadka ka socda Adeegga Ganacsiga ee Ukraine tan iyo Diisambar 7, 2018, waxay u baahan yihiin soo saarayaasha Belarusiyaanka ah inay bixiyaan lacag ah qiyaasta 42.96% qiyaasta bacrinta dibedda laga keeno. Shuruudaha Guddiga Canshuuraha ee Gobolka ayaa ah inay bixiyaan waajibaad ka horjoogsanaya daadinta by soo dajiye, iyadoon loo eegin wadanka asalka.
Xilligan la joogo, in ka badan 100 gaari oo leh Bacriminta ayaa ku yaalla xudduudaha xuduudaha. Waxaa la saadaaliyay in, illaa Arbacada, illaa 200 oo baabuur leh Bacriminta Belarjiyaanka lagu xiri doono saldhigyada Korosten, Sarny, Snovsk iyo kuwo kale.
Sida laga soo xigtay khubarada, dhammaan noocyada bacriminta, iyo si kaamil ah, inta badan, waxay leeyihiin tilmaame aad u hooseeya ee nitrogen, taas oo noqon lahayd walax firfircoon leh koritaanka khudaarta iyo miraha.
Wakiilada alaabta waxay tixraacayaan warqad maareyn ah oo aysan muujin. "Warqad" ayaa muujisay in waajibaadka aan lagu soo rogin alaabta laga sameeyay dalalka kale, marka laga reebo Ruushka iyo waddamada aan haysan shahaadada asalka. Belarus, sida laga soo xigtay wakiillada, waa inaysan ku dhicin qaybtan.